Mido oo fariin u diray ciyaartoyda xulka Masar ka hor kulanka galabta ay la ciyaarayaan Sucuudiga – Gool FM
Mido oo fariin u diray ciyaartoyda xulka Masar ka hor kulanka galabta ay la ciyaarayaan Sucuudiga
Liibaan Fantastic June 25, 2018
(Moscow) 25 Juunyo 2018 Halyeeyga reer Masar ee Ahmed Hossam Mido ayaa fariin u diray ciyaartoyda xulka qaranka Masar ka hor kulanka galabta ee Sucuudiga.
Ahmed Hossam Mido ayaa u sheegay ciyaartoyda Masar inay noqonayaan jiilkii ugu liitay ee Masar koob adduun ku matala haddii laga adkaado galabta.
Wuxuu intaa ku daray in guul ay gaaraan ay ka dhigan tahay inay noqdaan jiilkii ugu horeeyay ee xulka Masar u soo hooya guushii ugu horaysay ee koobka adduunka.
Ahmed Hossam Mido ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray:
“Kulanka maanta aad ayuu muhiim ugu yahay Masar, guuldaro waxay ka dhigaysaa jiilkaan kii ugu liitay ee soo gaara koobka adduunka, guushuna waxay ka dhigaysaa jiilkii soo hooyay guushii ugu horaysay ee xulka Masar uu ka gaaro koobka adduunka”.
Qoraalka Mido oo sii socda ayuu ugu sheegay ciyaartoyda in guul daro ay qaataan maanta ay ka dhigan tahay in kubadda cagta Masar ay dhibaato lugaha la gali doonto, laakiin guusha ayuu sheegay inay hagaajin doonto dhib walba oo haysta xulka.
Marco Verratti oo ku dhaw inuu heshiis cusub u saxiixo PSG
PSG oo ku dhaw saxiixa Faouzi Ghoulam